Baqatoota Oromoo fi Lammii Oromoo Biyya Jirtan Hundaaf! | Oromo Freedom News and Views
← Qabsoon bilisummaa Oromoo garamitti deemaa jira?
Baqatoota Oromoo fi Lammii Oromoo Biyya Jirtan Hundaaf!
Baqatoota Oromoo fi lammii Oromoo biyya jirtan hundaaf!!!
EU Parliament Hearing 26/9/2012
Ilmaan Tigray dargaggoo Oromoo hojii dhorkatan jireenya itti dukaneessan biyya akka baqatani dhuman gocha jiru. Shamaran Oromoo amoo biyyoota arabatti guguratani fixaa jiru. Shamaroon Oromoo biyya Lebanos, Kuwet, Oman, Saudi Arabiya, Arab-Emreta keessati Meesha Araba ta’aan jiru. Dargaggoon Oromoo yunivarsitii hunda irra eebfaman hojii dhabuu irran kan ka’e Sudan, Kenya, Djibuti, Somalia, Libya, Egypt, Yemen irratti gidra arga jiru. Italia fi Isreal baqataatti balbala cufatan waan jiranf lammin keenya Gamoojii (Baraha) Onge Egypt (Sinai ) keessatti dhuma jiru. Mannen Hidhaa Sudan, Libya fi Egypt keessa Millionan kan lakkawamantuu dararaa gudda keessa jiruu.
Oromoo fi Eritrean heedun gara Isreal galuu yaalan Sinai bakka jedhamuuti, Mana hidhaa fi namootan qabaman ajeefaman fi heedun isaan lubun ba’aa waan jiruuf Oromoon kami iyuu gara sinai Egypt akka hin deemne. Oromo Somail, Djibuti, Libya Sudan, Egypt keessa jiran akeekachisa fi Ibsa keenya utuu dhagessan Oromoon kami iyuu gamoojii (Barah) Sinai fi Galan India fi Mederterniyatti seenan akka lubun isaan hin banee isiini dhamna.
Lubu Baqatoota kana bararuuf mariin Gamoo European Parlamaa Keessatti Fulbana 26, 2012 irra hubanee kan nu barsisee yoo jirate lubu. Nami du’aaf murteefate biyya ba’uu Oromoon Biyya isaa hormi samee nyacha jiru, diina isaa Oromiya samee duroome sana samee nyachuu dhisee gamoojii (Barah) keessatti buluqan dhumuu, Galana India fi Medertaraniya keessatti irrabaata Qurxummii ta’uu irra fi kan kana irra hafee Yemen ga’ee Yemenootan Ajeefamuu , dirqisfamee gudeedamuu, hidhamee reebamuu, qalame onee fi kaleen isaa gurguramuu mana, laga abba of keessatti bosona seenan diina samani jirachuun filatama dha. Oromoo kana booda diina lafa isaa irra isaa ari’atefi waan tokko ilee gaduuf hin qabuu, Waan argen bakka argetti diina isaa samee angoo abba biyyuma isaa deefachuu. Qabeenya Oromoo Diini samee nyacha jiru kana wal gurmeesuun diina irra fudhatani nyachuu manna bishantti qurxumiin isiin nyachuun siiri miti dhabadhaa yadaa gara diina keenyatti haa deebinu.
Tigroon hara’a Oromoo samani duroman ilman warqee ofin jeedhan fi qabeenya Oromoo qufani warqee haguu eegalan kun bara 1992 yeroo finfinnee galan Hnqaaquu fi Diniichaa wal hin beekan turan. Wara bakka itti finca’an fi titi nyatan wal hin beekne turan. Hara lafa keenya dhunfatan isaa isaan irra hafe amoo Biyyoota Adunya mara waman itti gurguracha jiru. Oromoon amoo lafa isaa irra ari’amee biyya gadi dhisee biyya nama gallufuu karatti dhumuun salphina. Gaddii keenya inni guddan amoo Oromoo isaa baqatee jiru kana utuu hin tanee beekan Oromoo, media Oromoofi dhaabilee Oromoo Baqatoota kana irratti falmachuu yookiin amoo gorsa ilee dabarsuu dhisan ta’uun isaani nu gadisisee jira sababn isaa Oromoo isaa kam bulchuuf akka qabsa’oofnu walalee jirruuf.
Biyya Yemen keessatti Oromoon akka Bofa du’eetti yamuu lubu isaa waliin fanifamuu, ija isaan abidan gubuu, Mucaan dhiira wagga 2 fi Jarsii waggaa 60 seera uumaman ala dirqisifaman yamuu gudeedaman, Dubarii Oromoo yeroo tokkotti warrana Yemen 100n sagagaluman yamuu irratti rawwatamuu Mootummoon Adunya fi UNHCR irra caalisan jiru. Adunyan irra jiruu kun Adunya dhugga utuu hin tanee adunya Fayida ta’uu ishee baratan Oromoo Yemen deemuuf Galana India keessatti dhumuuf murten tokko ilee barbadamaf hin jiru. Iyyanoon keenya Mootumma Europa fi Adunyatti dhiheefacha jiru ilee furmata fidaa hin jiru.
Dargaggoon oromoo biyya keessa jirtan hundaaf biyya Europa fi Amerika warqeen yookin mallaqi lafa ta’ee isiin eguu hin jiru. Akka kana rakatan wari Italia fi Malta galan Oromoo heedun mana hidha keessa jiru. Waan nu gadisisu amoo Media Oromoo rakkoo ilman Oromoo kana qooratee Oromoo barsisuu yookin Mootummoota Adunyatti iyaachuu dhisani Dhaabileen Oromoo wal qooqoodan wal irratti Olola barreesuu yookan amoo Habashaf xinxala siyyassa lachuuf yookin amoo Habasha biyya nu ari’atee jala akka hiriruu samuu nu hadochuu hojii guda godhachuun lamii dhugaf falmatuu moggesuun gari mitti . Guyyaa tokko bakki itti wal gaafanuu ni dhufa ta’a. Mucaan Yementti Maruman isaa ala ba’ee nama iyyatuf dhabee kun gudatee enyuuma jara kana saxilun isaa hin oluu.
Dhaabilee Oromoo, Median Oromoo beektoon Oromoo rakoo kana utuu beekan calisuun siirii waan nutti hin fakanenef rakko jiru madaluun dhamsaa kana gadii fi murtee xumuraa isiin dhamuu barbanee jira. Warii kan ittigaafatamuama fudhachuu manna calisan ilee unni amoo waan nutti mulatee lammii keenyaf ibsiine ittigaafatamuma fudhachuuf murteefanee.
Dhamsaa Keenya isaa xumuraa:-
Dargaggoo fi Shamaran Oromoo biyya keessa jirtan hundaaf:-
1. Shamaran Oromoo wayyanen biyya Saudi Arabiya fi Biyyoota Araba hunda keessatti gurgurachaa jirtu erga achii ga’ani booda darara isaan irra ga’uun Marachaa, Ajjefama, hidhama fi dararami dhala nama irra hin geenye irratti rawwatama jira kan biyya jirtan biyyaa akka hin banee.
2. Dargaggoon Oromoo biyya hunda keessa jiran adunyan fayida ishee qoofa deggertuu kun xiyeefanoo dhorktee, Araboon qalaani Onnee fi Kalee isaan keessa guratan gurgurachaa jiru, kaanafuu biyya ba’uun bu’aa isaa irra balaan isaa waan caaluf biyya hin ba’iina,
3. Europa fi USA wari seeran ala seenan ilee mana hidha yookin amoo warqaa dhaban bakee keessa bula jiru achii ga’uun ilee furmata arifata hin fiduu,
Baqatoota Oromoo biyya ollaa jirtan hunaaf:-
1. Biyyi Olla Ethiopia hundi Eritrea irra kana hafee hundi isaan wayyanee waliin waan hojjetanf rakko isiin irra ga’aa jiruu baqataa Galanatti naqammtan dhumuu irraa yeroof ilee bakka UNHCR jirutti baqachuu qabduu.
2. Sudan fi Egypt irra katani Gamojii (Ongee) sana keessatti dhumtuu hin deemna, yoo dabartan ileeLibya keessatti hidhatuu isiin egata.
3. Malta fi Italian ilee Manuma hidhatti
4. Somalia fi Djibuti irra gara Yemen deemun ammo Mana abida seenudha.
1. Dargaggoo fi Shamaran biyya jirtan hundi Mootummaan Ethiopia (Mafiyan Ethiopia) kan keessan kan hin tanee ta’uu isaa beektan isiin ammoo wal gurmeesitan Mafiya kana samuu, Mallaqi fi Qabeenyi biyyatti kan Oromoo waan ta’ee waan argitan fi bakka argitan qabeenya diina hunda dhunfachuu qabduu.
2. Dargaggoon fi Shamaran Oromoo biyya ollatti baqatani jirtan hundi keessan wal gurmeesitan Dhaaba siyaasaa kamuu utuu hin eegin biyya galuun diina buqisuuf murteefachuu qabduu.
3. Mallaqa fi meesha ittin diina loluu diina irra fudhana malee Oromoo biyya ala ta’ee wal qooqoodu kana irra yookin amoo mootumma biyya ala irra waan eganuu tokko ilee akka hin jiree beekuu qabna.
4. Murtee Dargaggoon Oromoo biyya keessa fi biyya alatti baqatee jiruu murteefatuu kana kara itti argisisuf hamilee fi gorsaa lachuuf gama keenyan gara boodeeti akka hin deebnee waada isiin gala.
Oromiyan Ni bilisoomti !!!
Diina kami iyuu jala hin hiriruu!!
Gumi Paarlamaa Oromoo
Fulbana 29, 2012
Posted on 18/10/2012 | Aside
Posted on 18/10/2012, in Uncategorized. Bookmark the permalink.	Leave a comment.